Hindi: Fandresena Tamin’ny ‘Cricket’ Sy Sakafo Matsiro Tany Delhi Taloha · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Avrily 2018 15:36 GMT
Salanitra ireo mpankafy ny ‘cricket’ indiana satria nandresy indroa misesy i India raha nifandona tamin'i Aostralia izay efa in-4 tompondaka no sady mbola tompondaka ankehitriny tamin'ireo lalào roa voalohany tamin'ny lalao famarànana ny Commonwealth Bank Series, izay nivoahan'ny ekipa fahatelon'i Sri Lanka ho mpandresy tamin'ny nandavoany an'i Aostralia ilay tompondaka erantany, tamin'ny lalao farany nataon-dry zareo mialoha ny tena famarànana tamin'ilay andian-dalào. Tantarain'i Pankaj avy ao amin'ny Cricket Fever fa ity raki-pandresena ho an'i India ity dia 24 taona taorian'ny nandresen'ny tigra Indiana mivantana ny kangoroa Aostraliana tany amin'ny tanin'i Aostralia, karazana fihatahana amin'ny sori-dalàna ho an'ny ekipa iray nanamontsana ireo ekipa iraisam-pirenena rehetra eto amin'ny planeta sady tompon'ny Amboara Erantany nandritra ny 12 taona farany.
Ambaran'i Pankaj ny fomba nilazan'ny kapitenin'ny ekipan'i Aostralia Ricky ‘Punter’ Ponting tamim-pahatokian-tena talohan'ny lalao famaranana voalohany fa tsy hatao ny lalao famaranana fahatelo, tamin'ny fanomezany hafatra mazava tao anaty teny miafina fa ho rombahan'ny ekipany mandritra ny lalao roa voalohany ny andiany. Tsy fantatr'i Ponting fa ho tanteraka an-tsakany sy andavany ny teniny saingy tsy amin'ny fomba ilàny azy fa hiafara amin'ny lafy ratsin'ny faharesena, lafiny izay heverin'ny maro fa hifarana amin'ny andian-dalao andrana izay taloha tsy natao ho an'ny mpitsara lalao malemy (lazain'ny maro hoe ‘miangatra’) amin'ny ekipa indiana !
Raha ny momba ny ekipa indiana, lazain'i Pankaj fa tena fahombiazana ity andian-dalao indray andro ity satria nanana mpilalao tanora maro manantalenta, kapiteny manana toe-tsaina ‘tsy manaiky resy’ izay tsy milefitra ry zareo. Araka ny filazany, raha toa ka nisongadina tamin'ilay andian-dalao ilay tanora mpitifitra haingana Ishant Sharma, dia ilay andian-dalao mihitsy no naneho fa tsy misy fomba hafa ho an'ilay henjana Sachin Tendulkar izay nitifitra nanosika an'i India ho amin'ny fandresena miaraka amin'ny fanafihany tsy manan-tsahala.
Mitantara ny traikefany amin'ny fitadiavana sakafo ao Delhi taloha, faritr'i Chandni Chowk i Dipanshu ao Musafir, faritra izay mbola andehanany mihinana paranthas (karazana mofo) mampilendalenda sy matsiro any Paranthe wali Gali izay feno trano fivarotana paranthas fotsiny efa an-taonany maro fa ankehitriny efa misy ny trano fivarotana vitsivitsy mivarotra paranthas vao vita amin'ny tsirony samihafa (noana sahady aho izany, eh !).
Avy eo izy nanohy nitantara ny momba ilay trano fivarotana chaat malaza ery amin'ny faran'i Paranthe wali Gali izay tsy mivarotra afa-tsy “aloo tikki” sy “dahi bhalle” matsiro. Ary eo aloha keliny eo, hoy izy, ilay trano fivarotana vatomamy malazan'i Ghantewala, anarana nalaina avy tamin'ilay lakolosy lehibe (antsoina hoe “ghanta” amin'ny teny hindi) izay zatra nihantona teo ivelan'ilay trano fivarotana tamin'ny andron'ny Mughal.
Nomarihany ihany koa fa sendra trano fivarotana “chaat” iray lehibe izy teo akaikin'ny Moske avoben'i Fatehpuri ary raha ohatra ka misy mankafy sakafo tsy vita avy amin'ny zavamaniry dia tokony manandrana ilay Karim malaza, eny akaikin'ny Jama Masjid, sakafo Mughlai ao amin'ilay trano fisakafoanana tranainy efa zato taona izay voalaza fa nosokafan'ny taranaky ny mpahandro sakafon'i Bahadur Shah Zafar , ilay mpanjaka farany tao Mughaltamin'ny 1913.
Mahatsiaro ireo andro fahiny i Abhishek ao amin'ny Shabdarth, tamin'ny fotoana nandefasana voalohany tao amin'ny Doordarshan ilay andian-tantara mitohy fandefa amin'ny fahitalavitra ( notontosain'i Ramanand Sagar) momba ilay tantara malaza hindu Ramayana. Amin'izao fotoana izao dia mandeha ao amin'ny NDTV Imagine ny andiany nohavaozina tamin'ilay tantara malaza (notontosain'i Prem Sagar, zanakalahin'i Ramanand Sagar), nampiverina ny sain'i Abhishek ho amin'ilay dikany taloha an-taona maro lasa izany ary mamerina aminy ilay fahatsiarovana fahiny rehefa tafavory marobe eo ivelan'ny tranony tany ambanivohitra ny olona mandritra ny fotoana fandehanan'ilay tantara satria ry zareo irery no tanana fahitalavitra tamin'ny iray an-tanàna.
Nanome ny rohy : Narad